Soogalootiga ku nool dalka Talyaaniga oo la soo daristay cabsi xoogan… – Hagaag.com
Soogalootiga ku nool dalka Talyaaniga oo la soo daristay cabsi xoogan…
Posted on 3 Juunyo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Kumanaan soo galooti ah oo kunool dalka Talyaaniga waxaa lasoo darsay cabsi xoogan kadib markii Dowlada cusub ee talada dalkaasi la wareegtay shaaca ka qaaday in dalka ka saareyso soo galootiga dalkaasi kunool.
Wasiirka cusub ee Arrimaha Gudaha dalka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in markan soo dhamaatay baashaalkii iyo noloshii ay Talyaaniga ku heesteen soo galootiga, waxa uuna ugu baaqay in ay boorsooyinkooda xir xirtaan soo galootiga.
” Wey soo dhamaatay baashaalkii ay soo galootiga ku haysteen dalka Talyaaniga, waxaana leeyahay boorsooyinkiina xir xirta oo isku diyaariya in dalka la idinka saaro” Ayuu yiri Wasiirka Arimaha Gudaha Talyaaniga.
Talada dalka Talyaaniga waxaa la wareegay Ra’isul Wasaare Giuseppe Conte , xisbiyada uu matalo Ra’isul Wasaaraha ayaa horey u balan qaaday hadii talada dalka Talyaaniga qabtaan in soo galootiga dalka ka saari doonaan.
Soo galooti badan oo kunool dalka Talyaaniga ayaa hadda waxaa lasoo darsay cabsi ay ka qabaan in dalkaasi laga saaro, waxa ayna dadkan ka warsugayaan in Baarlamaanka Talyaaniga uu codka kalsoonida siiyo ama u diido Xukuumada cusub.